ကိုယ်ကအကောင်းဆုံးချစ်ပေးခဲ့ရက်နဲ့ ထားခဲ့တဲ့သူအကြောင်းတွေးပြီးအချိန်မကုန်ဆုံးပါနဲ့…ဘာလို့လဲဆိုတော့ 🌸 – Trend.com.mm
Posted on August 2, 2018 November 30, 2018 by Noel
ကိုယ့်မှာလည်းဘာအပြစ်၊ဘာအမှားအယွင်းမှမရှိပဲ လမ်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး၊လမ်းခွဲပေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ဖူးသူတွေရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလအတော်ကြာတဲ့အခါ သူတို့ပြန်လာကြပါတယ်။ပြန်လာခွင့်တောင်းကြတယ်။ထွက်သွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှ ဘာလို့သူတို့ပြန်လာကြတာလဲ?
လမ်းခွဲပေးလိုက်ပေမဲ့ ကိုယ်ကချစ်နေဆဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ သင်အမြဲတွေးနေမိမယ်။နောက်တစ်ယောက်တွေ့သွားတာလား။ဘာအမှားလုပ်မိလို့ဒီလိုမျိုးလမ်းခွဲလိုက်ရတာလဲ၊၀မ်းနည်းပူဆွေးနေမယ်။တစ်ယောက်တည်းအသည်းကွဲနေမယ်။ဘယ်မှလည်းမသွား၊ဘာမှလည်းလုပ်ဖုိ့စိတ်မပါနဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို အဓိပ္ပာယ်မရှိကုန်ဆုံးလာမယ်။ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကြာလာလို့ ကိုယ်က တစ်ယောက်တည်းနေသားကျသွားတဲ့အခါ သူတို့က ပြန်လာဖို့ခွင့်တောင်းမယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ သင်တွေးမိမယ်။ထွက်သွားတုန်းကလည်းကိုယ်ခွင့်မပြုရင်တောင်ထွက်သွားမယ့်သူက ပြန်လာဖို့ခွင့်တောင်းတယ် ဘာလားပေါ့။
ဒီလိုမျိုးထွက်သွားတုန်းကတော့ သာသာယာယာထွက်သွားပြီးမှ အချိန်တွေလည်းကြာပြီးမှသူတို့ဘာလို့ သင့်ဆီပြန်လာချင်ကြတာလဲ? ဖြစ်နိုင်တာကတော့သင်က Rebound တစ်ခုလို ခုန်လိုက်ပေမဲ့ ပြန်ကျလာတဲ့အစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပဲ။ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆုံး သူတို့ဘာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလဲဆိုတာ သေချာသိသွားနားလည်သွားကြလို့လဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီအတွက်အဖြေက အတိအကျတော့မရှိပါဘူး။သူတို့ နောက်အသစ်တစ်ယောက်နဲ့တွဲရတာပျင်းလာလို့၊သင့်လိုမျိုးသူ့အပေါ်နားလည်မှုမပေးနိုင်ကြလို့ စသဖြင့် သင့်လောက် ကောင်းတဲ့သူမရှိဘူးလို့တွေးမိလာတဲ့အခါ နောင်တရပြီးပြန်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ဆီကနေထွက်သွားတုန်းကထွက်သွားပြီး ပြန်လာတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်သလဲ? ဒါက သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ပြန်လက်ခံမှာလား။ငြင်းပယ်မှာလား။သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ။တကယ်လို့များ သင်က အမှားလည်းမလုပ်ထားခဲ့ဘူး။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အပေါ်လည်း တတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးချစ်ပေးခဲ့ရက်နဲ့ သူတို့ထားခဲ့တဲ့အခါ၊သူတို့ထွက်သွားတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အချိန်တွေကို သူတို့အကြောင်းတွေးပြီးမကုန်ဆုံးပါနဲ့။ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်ကိုသာ အချစ်တွေတိုးပေးလိုက်ပါ။အချိန်တန်လို့သင့်လောက်သူတို့အပေါ်ကောင်းတဲ့သူ မတွေ့တဲ့အခါ ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ နောင်တတွေနဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီအခါကျ သင့်ဘက်က ခံစားချက်ကိုမလိမ်ညာပဲပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ရဲဖို့ပဲလိုပါတယ် 🌻
ကိုယျ့မှာလညျးဘာအပွဈ၊ဘာအမှားအယှငျးမှမရှိပဲ လမျးခှဲခံလိုကျရတဲ့အဖွဈမြိုး၊လမျးခှဲပေးလိုကျရတဲ့အဖွဈမြိုးကွုံခဲ့ဖူးသူတှရှေိမှာပါ။ဒါပမေဲ့အခြိနျကာလအတျောကွာတဲ့အခါ သူတို့ပွနျလာကွတယျ။ပွနျလာခှငျ့တောငျးကွတယျ။ထှကျသှားဖို့ရှေးခယျြခဲ့ပွီးမှ ဘာလို့သူတို့ပွနျလာကွတာလဲ?
လမျးခှဲပေးလိုကျပမေဲ့ ကိုယျကခဈြနဆေဲဖွဈကောငျးဖွဈလိမျ့မယျ။အဲ့ဒီအခါမှာ သငျအမွဲတှေးနမေိမယျ။နောကျတဈယောကျတှသှေ့ားတာလား။ဘာအမှားလုပျမိလို့ဒီလိုမြိုးလမျးခှဲလိုကျရတာလဲ၊ဝမျးနညျးပူဆှေးနမေယျ။တဈယောကျတညျးအသညျးကှဲနမေယျ။ဘယျမှလညျးမသှား၊ဘာမှလညျးလုပျဖို့စိတျမပါနဲ့ အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို အဓိပ်ပာယျမရှိကုနျဆုံးလာမယျ။ဒီလိုနဲ့ အခြိနျတှကွောလာလို့ ကိုယျက တဈယောကျတညျးနသေားကသြှားတဲ့အခါ သူတို့က ပွနျလာဖို့ခှငျ့တောငျးမယျ။အဲ့ဒီအခါကတြော့ သငျတှေးမိမယျ။ထှကျသှားတုနျးကလညျးကိုယျခှငျ့မပွုရငျတောငျထှကျသှားမယျ့သူက ပွနျလာဖို့ခှငျ့တောငျးတယျ ဘာလားပေါ့။
ဒီလိုမြိုးထှကျသှားတုနျးကတော့ သာသာယာယာထှကျသှားပွီးမှ အခြိနျတှလေညျးကွာပွီးမှသူတို့ဘာလို့ သငျ့ဆီပွနျလာခငျြကွတာလဲ? ဖွဈနိုငျတာကတော့သငျက Rebound တဈခုလို ခုနျလိုကျပမေဲ့ ပွနျကလြာတဲ့အစှမျးမြိုးပိုငျဆိုငျထားလို့ပဲ။ဒါမှမဟုတျ နောကျဆုံး သူတို့ဘာကိုဆုံးရှုံးလိုကျရလဲဆိုတာ သခြောသိသှားနားလညျသှားကွလို့လဲဖွဈလိမျ့မယျ။ဒီအတှကျအဖွကေ အတိအကတြော့မရှိပါဘူး။သူတို့ နောကျအသဈတဈယောကျနဲ့တှဲရတာပငျြးလာလို့၊သငျ့လိုမြိုးသူ့အပျေါနားလညျမှုမပေးနိုငျကွလို့ စသဖွငျ့ သငျ့လောကျ ကောငျးတဲ့သူမရှိဘူးလို့တှေးမိလာတဲ့အခါ နောငျတရပွီးပွနျလာတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး ကိုယျ့ဆီကနထှေကျသှားတုနျးကထှကျသှားပွီး ပွနျလာတဲ့အခါ ဘာလုပျသငျ့သလဲ? ဒါက သငျ့ရဲ့ ရှေးခယျြမှုပါပဲ။ပွနျလကျခံမှာလား။ငွငျးပယျမှာလား။သငျ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြပါပဲ။တကယျလို့မြား သငျက အမှားလညျးမလုပျထားခဲ့ဘူး။သငျ့ရဲ့လကျတှဲဖျောအပျေါလညျး တတျနိုငျသလောကျအကောငျးဆုံးခဈြပေးခဲ့ရကျနဲ့ သူတို့ထားခဲ့တဲ့အခါ၊သူတို့ထှကျသှားတဲ့အခါ သငျ့ရဲ့အခြိနျတှကေို သူတို့အကွောငျးတှေးပွီးမကုနျဆုံးပါနဲ့။ကိုယျ့အပျေါကောငျးတဲ့သူတှအေပျေါကိုသာ အခဈြတှတေိုးပေးလိုကျပါ။အခြိနျတနျလို့သငျ့လောကျသူတို့အပျေါကောငျးတဲ့သူ မတှတေဲ့အခါ ပွနျလာပါလိမျ့မယျ။နောငျတတှနေဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီအခါကြ သငျ့ဘကျက ခံစားခကျြကိုမလိမျညာပဲပွတျပွတျသားသားဆုံးဖွတျရဲဖို့ပဲလိုပါတယျ
ဒိတ်သတင်းတွေကြောင့် ဒေါသလည်းဖြစ်ရသလို စိတ်လည်းပင်ပန်းနေပြီလို့ပြောလာတဲ့ Park Min Young 😥